Demographics nke Online Grocery Shopper
Di na nwunye ole na ole gara aga, m nwalere Clicklist, Kroger si online nri ụlọ ahịa. Usoro ahụ enweghị ntụpọ, yana ọtụtụ uru karịa ịzụ ahịa ahịa. Nke mbụ, enwere m ike ilele mmefu ego m mgbe m na-etinye ihe ọ bụla n'ime ụgbọ m. Enwere m ike ịhụ ihe ọ bụla m na-ere nke ọma. Usoro ahụ na-achọpụta ngwaahịa m kachasị m zụrụ. O were m 10 nkeji iji gbagoo, mee ka ndị Kroger buru ụgbọ ala m, ma lelee
N’izu ụka a agara m zụọ ahịa na Ahịa Kroger ọhụrụ. Akụkụ akụkụ… ma ọ bụrụ na naanị Kroger chere etinye na ha online ọnụnọ dị mkpa dị ka ha mkpọsa ọnụnọ. M digress. E wuru ụlọ ahịa ọhụrụ ahụ n'okporo ámá site na Kroger gara aga. Otu nzọụkwụ n'ime ma ị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya. Ebe a na-eme bred na achịcha Artisan ọhụrụ, nri na tebụl gọọmenti a raara onwe ya nye, Starbucks, sushi counter, na ịzụ ahịa maka otu ụmụaka, ihe egwuregwu,